Asa Fanatsarana sy fanitarana : Fonjaben’Arivonimamo miova
Published Date: 29 juillet 2021
Ny asa miroso, ny mpanaratsy afara.
Porofo hita maso sy azo tsapain-tanana ny asa fanitarana ary fanatsarana eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tontosa androany Alakamisy 29 Jolay 2021 ny fandraisana ireo asa vita etsy amin’ny Fonjaben’Arivonimamo. Mpanohana ny Fikambanana « Ancre du Salut ».
Anisan’ireo Velirano ataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Atoa Andry RAJOELINA, sy fanamby apetraky ny Governemanta tarihin’ny Praminisitra, Atoa Christian NTSAY, ny fanatsarana ny asam-pitsarana.
Solontenam-panjakana maro no tonga nanatrika izany raha tsy hitanisa afa-tsy ireo olom-boafidy sy olom-boantendry. Anisany, ireo Solombavambahoaka, ny Governoran’Itasy, ary ny Ben’ny Tanànan’Arivonimamo.
Nisolo tena ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO kosa, ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa SAVATSARAH RABY Gabrielle Ain’Harimanga, sy ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja Atoa ANDRIAMAROAHINA RANAIVO Tovonjanahary
Ampahafantarina isika fa tokana ihany ny pejy ofisialy « facebook » an’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Madagasikara.
Hosoka sy sandoka ny ankoatra ity https://www.facebook.com/Minist%C3%A8re-de-la-Justice-de-Madagascar-230944033982121.
Ohatra amin’izany ity pejy iray ity :
Fitsarana manakaiky vahoaka : Fakan-tahaka ny TPI ao Fenoarivo Atsinanana
Ny toky fitaka fa ny atao no hita, ary ny bainga voavadika ihany no porofon’ny asa. Fakan-tahaka sy mendri-piderana ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) ao Fenoarivo Atsinanana amin’ny ezaka Fitsarana manakaiky vahoaka. Notokanana androany 23 jolay 2021 ny « kiosque d’information » ao.
Toerana izay natao hanomezana ny torohevitra rehetra mikasika ny paikady eo anivon’ny Fitsarana. Toerana natao ihany koa hametrahana ny mangarahara eo amin’ny raharaham-pitsarana,­ hiadiana amin’ny mpijirika ary hiadiana amin’ny kolikoly.
Manomboka izao dia tokana ny fidirana ary tokana ny fivoahana ao amin’ny Fitsarana.
Napetraka ihany koa ny rafitra roa eo anivon’ny Fitsarana dia ny:
-Vaomiera mpanara-maso ireo toeram-pamonjana na « Commission de surveillance de l’établissement pénitentiaire »,
-Komity miady amin’ny kolikoly na « Comité anti-corruption ».
Izao dia tafiditra indrindra ao anatin’ny Velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, sy ny tarigetran’ny Ministeran’ny Fitsarana ny amin’ny fametrahana rafim-pitsarana manakaiky vahoaka.
Soram-piankohonana : Manome fampiofanana ny TPI sy ny DERL
Nisokatra androany 21 Jolay 2021 etsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fampiofanana momba ny soram-piankohonana sy ny tontolo manodidina azy ary ireo pitsopitson-dalàna mifehy izany. Haharitra 2 andro ny fampiofanana. Ny avy ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany (TPI) Antananarivo no mikarakara, manampy ny avy amin’ny Foibem-pitondrana momba ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (Direction des Etudes et des Réformes Législatives) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.
Miatrika ny fiofanana kosa ireo tompon’andraikitra sy mpikirakira ny soram-piankohonana avy amin’ireo Boriborintany miisa 6 eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.